Likuphi Mecca? Ngiyiphi inarha lapha kuyinto Mecca?
Likuphi Mecca? Ngiyiphi inarha lapha ngabe ziye zaphumela yimuphi Muslim, abese ebuza lo mbuzo kwasekuqaleni. Iqiniso liwukuthi wonke umuntu othi Islam, lapho abenza imithandazo nsuku zonke, ubophekile ukuba ubuso ku bebheke kulo muzi.
Mecca, lapho kwakhiwa indlu enkulu yesonto oyinhloko emhlabeni Muslim, Itholakala entshonalanga yeNhlonhlo Arabhiya, km 75 ukusuka ogwini loLwandle Olubomvu. Namuhla, idolobha kungokwalabo Saudi Arabia, futhi iyinhloko-dolobha ye esifundazweni Hijaz.
Zonke izakhiwo eMecca mancane futhi kunalokho Friend esigodini enamadwala nxazonke uvalwe uzungezwe izintaba. Le ndawo lapho dolobha lisendaweni, ubhekwa yezindawo ezishisa emhlabeni. Amazinga lapha uphawu idlule 50 ° C. Inzika kusukela ngoDisemba kuphela April, kanye nazo zonke ezinye izinyanga zomnyaka kuwufanele ukushisa likhinyabeze.
Mecca - emzini ongcwele for Muslims kanye infidels angene ke akuvunyelwe nhlobo yimithetho Saudi Arabia.
Kuyiphutha ukuthi bakholwe ukuthi kuyanda Mecca waqala kuphela ukuvela Islam. Kusukela esikhathini eside esidlule, zonke izizwe zakwa-ezingamaqaba eNhlonhlweni ye-Arabhiya, eyaziwa kahle, lapho umuzi Mecca. It kwaku engcwele zako ezisemqoka - Kaaba. Ekuqaleni kwalo sanikezelwa lo nkulunkulu wamaqaba Hubal. Le ndawo ngenxa yokuthi, ngokusho legend eseduze nedolobha Yithuna Adamu no-Eva yaziwa.
Kusukela VI ekhulwini eMecca bachuma yokuhweba izinongo kanye, ngaphezu zabaningi, abathengisi ukuza lapha kusuka wonke amagumbi wonke.
Umlando Mecca ihlobene eduze igama of the Prophet Muhammad. Kukulo muzi lapho, ngokusho legend, umsunguli Islam wazalwa. On the eseduze kusukela emzini Mount Hira esizayo Prophet ukudlula izimvu zabo nezimbuzi, kamuva walithanda umhlalaphansi lapha ukucabanga wedwa. Kulezi vigils engenabantu Muhammad yaqala ukubonakala isambulo yakhe edumile.
Umlando okwalandela Mecca inamakhasi amaningi ezibuhlungu. Kwakuwusuku ukunqoba, kuphangwa, imililo kanye kubhubhane. Nokho, naphezu izinkinga eziningi, idolobha waphila, ukuthatha ama-pilgrim kusuka emhlabeni wonke futhi ngokucophelela aqaphe amathempelana yabo. zobuciko ezinkulu isakhiwo engcwele igcina mosque main eMecca.
Masjid al-haram (Engcwele Mosque) - one of the mosque endala futhi ngobukhulu emhlabeni Muslim. Lapho kukhulunywa ngaye okokuqala ke atholakala emithonjeni engu-638. Engakabi yayo liye lavuselelwa kaningana.
I last yokulungiswa ezinkulu kwenziwa ekhulwini XVI. Khona-ke isakhiwo yayakhiwe minaret lwesikhombisa. Iqiniso liwukuthi ngalesi sikhathi e Istanbul Yakhiwa edumile Blue Mosque, ephinde kwadingeka nemibhoshongo yabaseTurkey eziyisithupha. Imam Mecca kubhekwa okungcwele. Wayala ukunamathisela mosque main kwenye minaret ukuze mosque noma ezweni abakwazanga lidlule inani emzini wabo.
Okunethezeka Gate isakhiwo okuqoqiwe ngegolide ebony, negceke lizungezwe nenhle zemabula emphemeni nge nemengamo ezicijile.
Mosque eMecca ndiyaza ngobukhulu babo. Kuyinto enkulu kangangokuba kalula ukuhamba kwabantu namuhla, kukhona ngisho escalators.
Maphakathi Masjid al-haram itholakala isakhiwo, okuyinto iwumgomo oyinhloko zonke-pilgrim.
Kunzima ukusho lapho igama le yokwakha engavamile. Ochwepheshe abaningi bakholelwa ukuthi leli gama lasendulo - lisuselwa elithi "cube". Kukhona amanye amagama. Ngokuvamile, Kaaba libizwa Bayt al-haram, okusho "indlu engcwele". Kaaba shrine isibe, esikhathini eside ngaphambi kokuba ukuvelela Islam. Laliyiziko lwezinhlangano ezingathandwa ezibhekwa ngoba zonke izizwe zakwa disparate yeNhlonhlo Arabhiya.
Kaaba isakhiwo unxande enophahla oluyisicaba, futhi nomnyango eyodwa kuphela. Ingaphakathi namuhla libukeka izindonga oluze, ehlotshiswe amazwi iKoran. Ngaphandle Kaaba isiqedile bushelelezi egwadle Meccan, futhi phezu kwalo embozwe iveli ekhethekile ezihlotshisiwe, lokuyintfo olusha njalo ngonyaka.
Ngokwe-legend phakathi nesikhathi Muhammad in Kaaba inhlekelele yabhidlika kabana, wayesefakwa ayehileleke ngokuqondile ukulungiswa kwesakhiwo engcwele. Lokhu kwenzeke ngisho nangaphambi wathatha umsebenzi of the Prophet. Ngemva ukubuyiselwa "indlu engcwele" kwakudingeka enze elinye isiko ezibalulekile - faka ku odongeni esempumalanga Kaaba itshe abadumile abamnyama. Ngenxa yalokho, abathola lesi nodumo olukhulu, kwakukhona ingxabano enkulu, futhi ngenxa yalokho banquma ukuphathisa kuwo niye kwesokunene kumuntu wokuqala abangena mosque ekuseni phakathi kwamasango odumile we Meccans. Ngakho lindoda-ke yayiyisikhulu Mohammed. Futhi ngokuqinisekile isibonakaliso esivela ngenhla.
Adume lwetshe elimnyama ngesi-Arabhu esibizwa al-Hajar al-Aswad. It is ifakwe ohlakeni isiliva aboshelwe eyodwa ekhoneni Kaaba. Ngokusho yetinsita itshe enikezwa nguNkulunkulu ukuba u-Adamu no wayedabuka ezimhlophe. Ngokuhamba kwesikhathi, njengoba sengike ugxile izono zabantu, sibe mnyama.
Izazi Modern baphikisa ngokuthi itshe has a umsuka cosmic. Yasungulwa ngu ushayisile we meteorite ne-Earth. Ngokombono Geological umbono, kuba ingilazi foamed, okungadingi ukucwila emanzini. Lezi amatshe zivame atholakala eNhlonhlweni ye-Arabhiya, endaweni lapho kukhona eMecca. Ucezu elikhulu eliwa emkhathini nesisindo esingaphezu kwamathani ayizigidi ezimbili, manje ukubonisa Museum.
Ngokusho ubufakazi libhalwe abavubukuli, leli zamatshe ezingcwele black yake uhlukanise, kodwa ke eqoqwe futhi ifakwe ohlakeni esiliva. Nokho, kwakunzima ukuba kahle ukuhlola usosayensi mshini ngenxa yezizathu ezisobala.
AmaSulumane akhulekela itshe njengoba iwuphawu uthando futhi ithemba olungenamkhawulo e Ukuhlakanipha KukaNkulunkulu Okusiqondisayo. I isiko kissing itshe senzelwe ukubonisa ukuthobeka isithembiso abathembekile, kungakhathaliseki ukuthi benzani ukuhambisana nayo yonke izivumelwano uMprofethi.
Namuhla Mecca - a, muzi omkhulu yesimanje elinabantu elinabantu abayizigidi ezimbili. Idolobhakazi limatasa ekuthuthukiseni ebhizinisini nezezimboni imigomo.
Ngo-2010, eziyinkimbinkimbi ka namabhilidi ngobukhulu entsha, umhlaba lavulwa lapha. Lesi sakhiwo eliphakeme - Royal Tower liwukuphela kwesakhiwo yesithathu ephakeme kunazo zonke emhlabeni, futhi iwashi - kwekulu umbhoshongo iwashi emhlabeni.
Umuzi olawulwa kamasipala oholwa imeya, aqokwe Uhulumeni Saudi Arabia.
Budebuduze Mecca kuba yokukhempa omkhulu Minna ukuthola Hajj-pilgrim.
Likuphi Mecca, kulokho izwe? Lo mbuzo owabuzwa amaSulumane amaningi ozinikele, behlose ukwenza uhambo ebaluleke kakhulu ekuphileni kwakhe.
Hajj - lena pilgrimage enkulu ezindaweni engcwele yamaSulumane, uhlinzeka izitobhi izingoma ezimbalwa, eyokugcina zazo kumelwe nakanjani babe eMecca. Izwe Lokudabuka ngesikhathi esifanayo akunandaba.
Hajj kungaba indoda kufezeke ubudala avuthiwe wonkana kanye esangulukile. Engcwele kungathatha, nowesifazane, kodwa abekiwe ukuhamba kuphela uma kuhambisana isihlobo besilisa, noma njengeqembu.
Phakathi Hajj zonke-pilgrim kudingeka ukundlula kasikhombisa emhlabeni Kaaba esiphikisa futhi sichithe imicikilisho yokusebenzelana ambalwa wokweshumi.
Minyaka yonke Hajj bophezela abayizigidi, futhi ngenxa Mecca njalo uhlangabezana eziningi izinkinga ezihlobene nokubekwa kwabantu kanye nenhlangano ukunyakaza zabo ezithokomele emzini.
Ezinsukwini ukuthutheleka enkulu pilgrim emzini ngokuvamile zenzeka ngengozi. Ngokwesibonelo, ngo-1990 emhubheni abezinyawo kuxhumene Mina naseMecca, kwakukhona wayichoboza esabekayo. izisulu zawo ziyisikhumbuzo engaphezu kwenkulungwane abantu.
Lokhu kwenzeka akuyona icala ayesezindaweni ezingazodwa, kodwa akukho ngozi ngeke siyeke ethembekileyo esifisweni sabo ukuvakashela emzini ongcwele. Yingakho umbuzo iphi Mecca, kulokho lizwe, impendulo anikeze noma iluphi Muslim.
Medina - kwelinye idolobha engcwele yamaSulumane, esingesesibili ngobukhulu ngemva eMecca. Uma Mecca - emzini lapho Prophet azalwe, Medina - yindawo lapho eseqedile uhambo yakhe yasemhlabeni. Kunenye mosque engcwele emhlabeni Muslim - Al-Masjid an-Nabawi (Prophet Mosque).
Kukholakala ukuthi Muhammad ngokwakhe iqhaza ekwakhiweni kwalesi esontweni lamaSulumane, isakhiwo yayo usekhonze njengephayona isibonelo sokuba ekudalweni kwazo zonke ezinye emathempelini amaSulumane zonke emhlabeni. Lapha, ngaphansi komthunzi wesihlahla Dome enkulu green, ithuna uMprofethi, futhi eziyinkimbinkimbi yezakhiwo mosque futhi manje ingxenye yendlu lapho afike achitha khona iminyaka yokugcina yokuphila kwakhe.
Kanjani ukuze uthole naseMecca
Engxenyeni Saudi Arabia, lapho Mecca futhi Medina, namuhla Kuhanjwa ngendiza. Esikhumulweni sezindiza esiseduzane itholakala e Jeddah, elise nedlanzana amakhilomitha ambalwa ukusuka eMecca.
Kusukela Jeddah aya emizini ongcwele wabeka line high-speed wesitimela, ingasetshenziswa kuze kuphele amahora amabili nesigamu ukuya medina encane kuno-isigamu sehora - naseMecca.
Phakathi imizi Saudi Arabia kukhona endleleni elula futhi wesitimela ukuyivula futhi kuwo wonke esiteshini sesitimela noma sebhasi wena ngokuqinisekile ngeke babonise lapho Mecca nokuthi ungafinyelela kanjani kulo.
Nokho, akubona bonke-pilgrim bakhetha ukusebenzisa izindlela zesimanje zokuhamba. Kuze kube manje, kukhona amacala lapho abantu waqhubeka uhambo ngezinyawo, efana ezinsukwini zakudala.
Ngakho, bonke amaSulumane ozinikele kahle lapho Mecca yezwe lapho baphilele. Futhi abantu bazo zonke ezinye izinkolo, kukhona eyodwa ngendlela lelula ukuthola. Vele sibheke noma yikuphi mosque, kunoma iyiphi idolobha emhlabeni: mihrab salo uqinisekile ukuba olukhomba ohlangothini lapho Mecca itholakala.
Savelovsky Station: ukushayela ke? Umlando Savelovsky esiteshini
Umshini ubhedu emhlabeni (isithombe). Usezingeni wemishini best
Amoni uZeyusi Ihhotela 4 * (iGreece, Halkidiki): incazelo ehhotela, amakamelo, imisebenzi, ukubuyekeza
Ukugcwalisa i tartlets - zokupheka ukudla nsuku zonke futhi etafuleni samaholide.